Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta Caamir Muusa oo Shuruud ku xiray Ciidamo loo soo diro dalka Soomaaliya. | JILYAALE_ONLINE
Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta Caamir Muusa oo Shuruud ku xiray Ciidamo loo soo diro dalka Soomaaliya.
Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta Caamir Muusa ayaa Maanta caasimadda dalka Masar ee Qaahira oo saldhig u ah Jamacadda Carabta ka sheegay in aysan suurta gal ahayn in ciidamo ka socda dalalka Carabta iyo calamka loo diro Soomaaliya haddii aysan dhicin iswaafaq dhex mara garabyada Siyaasadeed ee Soomaaliya.
Jaamacadda carabta ayaa Bayaan ay soo saartay ku sheegtay hadalkan, kadib markii ay kulan Qaahira ku wada qaateen Caamir Muusa iyo wafdi ka socday Isbahaysiga dib u xoraynta oo uu horkacayay Sheikh Shariif Sheikh Axmed.
Kulan kaas oo uu Sheikh Shariif uga dalbaday in ciidamo Carbeed loo soo diro dalka Soomaaliya, kuwaas oo kaalin muhiim ah ka galaya Ciidamada Caalamiga ah ee badalaya Ciidamada gumaysiga Ethiopia.
Caamir Muusa ayaa adkeeyay Ahmiyadda ay leedahay geedi socodka nabadda iyo in la gaaro dib u heshiisiin qaran oo dhamays tiran iyo walibana in dib loo dhiso dalka Soomaaliya ee ay dagaaladu halakeeyeen.
Caamir Muusa ayaa ka digay in ay sii balaarato colaada ka taagan Soomaaliya wuxuuna yiri “sii socoshada Colaadda iyo deganaansho la’aantu waxay abuurayaan xaalad Quus iyo Niyad jab ah, kumana dhiiri gelinayso Jaamacadda Carabta in ay ku dhaqaaqdo dadaalo dheeraad ah” wuxuuna intaa raaciyay in Soomaaliya ay tahay Dal qani ah oo leh ilo dhaqaale oo kala duwan taas oo u baahan is afgarad dhex mara Soomaalida oo qura.
Xogahayaha Jaamacadda Carabta Camir Muusa ayaa carrabka ku adkeeyay in ay isbarbar taagayaan xasilinta Soomaaliya ayaga oo kaashanaya xoogagga Siyaasadeed ee Soomaaliya isla markaana ka fogaanaya in ay u kala eexdaan dhinacyada is haya.
← Dowladda Ethiopia oo dhex dhexaadineysa Madaxweyne C/llaahi Yuusuf iyo Ra’isal wasaare Nuur Cade.
Malaga yaabaa in ay daacad u noqdaan dalka iyo dadka Wasiiradan cusub. →